Masindahy Antoine Lehibe
Masindahy Antoine, ilay mpanirery no tsaroana ny 17 janoary. Teraka tany Egypte i Masindahy Antoine, niaina tamin'ny taona 251 izy ka hatramin'ny 356. Nampalaza an'i Antoine ny fampihaonana ireo olona nanirery tamin'ny fitsipi-piainana iombonana tany amin'izany toerana izany. Nahazo fanabeazana kristianina lalim-paka tamin'ny fianakaviany izy.
antoine du desert
Masindahy Marcel Voalohany, Papa
Naseho ny : 16 janoary 2020
Romanina i Marcel izay ankalazaina ny 16 janoary, ary voafidy ho papa tamin'ny 21 mey 308 izy handimby an'i Masindahy Marcellin, papa maty martiry roa volana talohan'io daty io. Ny Amperora Maxence no teo amin'ny fanjakana tamin'izay. Rehefa teo amin'ny Fiketraha masina i Marcel dia tsy nohadinoiny ny herim-po sy ny toe-panahy mendrika notahafiny tamin'ilay nodimbiasany.
Pejy 46 amin'ny 50